Guta rakasiyana. Guta rakasimba zvikuru uye rakazara noupenyu zvokuti hauzomboperi zvinhu zvitsva kuona nekuita. Kuala Lumpur inzvimbo iyo modernity inosangana netsika. Kusvikira pakati pezana remakore re19th, nzvimbo iyo Kuala Lumpur iripo ikozvino yakafukidzwa nemvura inonzi rainforests. Yakanga ichangobva kuuya kwevashandi veChina, vaiuya ikoko kuzoshanda mumigodhi yematini, apo kugadzirisa kwakagadzwa uye nokukurumidza kuchinjwa kuva muguta rinokosha munharaunda ino. Nhasi, Kuala Lumpur ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kuwedzera maAsia maguta. Sezvo guta guru reMalaysia uye nharaunda yakakura yepasi rose, Kuala Lumpur inopa kuurayiwa kwezviitiko kune vanofamba. Kuenda Kuala Lumpur? Zvose Zvaunoda Kuti Uzive iri pano.
Iwe uchawana ndege dzisiri kurega kubva kumaguta makuru muIndia, zvakadai seNew Delhi, Mumbai, Chennai & Bangalore. Mushure mokunge musvika kuKuala Lumpur International Airport, munogona kukwira ku-non-stop KLIA Ekspres chitima chekutengesa-kutengesa kwehafu yenguva yekuenda kuguta. Uyewo inowanikwa mabhazi, mitero, kana kuti motokari, asi kazhinji vanotora awa kuti vapedze rwendo.
Kugamuchira Kuala Lumpur!
Saka pakupedzisira uri muKuala Lumpur. Ngatitangei kutanga. Tichadaro here?
Paunoshanyira guta racho, uchawana nzvimbo ine maoko akazarurirwa kune vashanyi, uye zvinhu zvakawanda zvokuita uye nzvimbo dzinoshanyira ku Kuala Lumpur! Ongorora zviitiko zvezvakaitika kare, tora zvokudya zvinonaka zvinobva kunevatengesi vomugwagwa uye gourmet chefs, kutarisa pamasvingo makuru, uye unakidzwe nepikiniki mune imwe yemapaki.
Rwendo Rwakapoteredza Vavakidzani MuKL
Bukit Bintang ndiyo nzvimbo inofanira kunge iwe uri mumakore makumi maviri. Ndiyo imwe yenzvimbo dzakakwirira dzekutenga mumuguta, uye zviuru zvevagari vemo uye vatashanyi vanofamba mumasikati kuti vaongorore mitsuwa kana kushanyira mamwe mazariro uye mabhidhiyo emanheru. Usapotsa Jalan Alor uko unogona kuwana imwe yepamusoro yezvokudya mumugwagwa muKuala Lumpur!
Nokuda kwerumwe rutivi rweAsia, kutungamira kuNy India, uko uchafukidzirwa muHam music, kunhuwirira kwe curry, uye mifananidzo yakaisvonaka ye saris nemaruva. Idya Thali pane imwe yeIndia restaurants!
2. Tenga Zvokudya Zvako Mwoyo Wako
KL ndiyo mwoyo wekutenga shopaholics. Kana iwe uri munzira yekuzvitenga mumugwagwa, Petaling Street muChinatown ichapedza pfungwa dzako kure ne plethora yemicheka yakavaraidza, zvipfeko & zvokudya. PaPataling Street Market unogona kuwana chero chinhu kubva kuT-shirts nekuzvishongedza kune zvemagetsi uye maDVD, uye zvese pamatsika, akaderera. Zvisinei, chikamu chakanakisisa pamusoro peiyo nzvimbo yekutenga ndiyo zvipfeko zvekudya kunze kwechidimbu chikuru. Pano iwe uchawana vagari vekumba vane nzara vachiita padziya dzembiya dzembiya dzeAsam laksa, tsika dzeHainan dzomukati uye zvinonhuwira mee goreng.
3. Enda Kunzvimbo dzezvitendero MuKL
Guta iri musha kune vaMuslim uye vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana zvekuMabvazuva, saka muchaona matemberi akawanda nemasikiti muKuala Lumpur.
Kana uine zuva rimwechete muKL, edza kubhadhara kushanya kune imwe yeiyo.
IThean Hou Temple ndiyo chivakwa chekuMabvazuva-chinamwarikadzi weChinese. Inosanganisira Buddhism, Taoism, uye Confucianism mune imba inonamatira yekunamatira kuna Mwari uyu.
The Mosque National, inozivikanwawo seMasjid Negara, inzvimbo yakashamisika yemazuva ano yakagadzirwa nebhuruu negoridhe. Iyo ine simba rokubata vanhu ve15,000 uye inoratidzika sechishongo chekusununguka kweMalaysia.
4. Enda Pasi Pakukuru Petronas Tower
Imwe yemifananidzo inonyanya kukosha muMalaysia ndiyo yakakurumbira Petronas Towers. Paunomira pasi pemasvingo maviri akaisvonaka, zvakaoma kutenda kuti haasi zvivako zvirefu kupfuura zvese munyika. Icho chigadzirwa ndechekugadzirisa kwemazuva ano emagariro echitendero cheIslam, sezvinogona kuonekwa nehupamhi hwepamusoro ye shongwe. Iyo shongwe dzakabatana nebhiriji rakapoteredzwa kusvika nehafu kubva kumusoro.
Kana iwe uine nguva yekuuraya, tenga tiketi iyo inokupa kuwanika kweSydney Bridge pane 41st pasi, uye Observation Deck pane 86th floor.
Imwe chivakwa chinozivikanwa ndiMenara Kuala Lumpur Tower, iyo ndiyo yakakwirira kupfuura terevhizheni munyika yose. Kwemakore akawanda, yakange ichikwezva vashanyi vane Skybox - imwe imba ine girazi pasi, masvingo nedenga, iri mamiriyoni 300 kumusoro kwevhu. Maminitsi mashomanana akapedza muSpacebox achaita kuti unzwe semhiri inokwira pamusoro peguta.
Paunenge uchibhadhara Menara, zvakakosha kuti uone kunze kweresitorendi inoshandiswa pane imwe nzvimbo yepamusoro yeshongwe. Kushandura kwakakwana kweresitorendi kunotora zvishomanana kweawa, izvo zvinokubvumira kufara panoramic yeguta racho. Uyezve, guta guru reMalaysia rinopa vanhu vanofadzwa vane bhati mumadziva ari pamusoro pedenga rehotera, kwavanogona kukoshesa misoro yePetronas shongwe.
Pane imwe tsika inoitika muKuala Lumpur usikulife scene, uye imwe inofadza, pasina mubvunzo. Rimwe zuva zuva rinopera kuKuala Lumpur, migwagwa inouya ichirarama nemapfumo emazuva ano, mahombekombe akaremba, nzvimbo dzinogara mumhanzi, rocking nightclub uye nzvimbo dzinoshamisa padenga reimba. Kunyangwe iwe uchida kutamba usiku uhwo, fara chikafu pasi pe nyeredzi kana kutarisa kuti magetsi eguta ari kunyura pasi pako, mazariro eKuala Lumpur nemakamuri achakupa muwandu wemagetsi nesimba.
Hazvina mhosva kuti bhajeti yako chii, KL inopa pokugara kumhando dzose dzefambi. Iwe unongoda kuve nechokwadi kuti uri kugara pakati peguta, saka iwe unogona kufamba nyore nyore kana kushandisa zvinyorwa zvekutakura kwevanhu.
Go forward & have a gala of time in Kuala Lumpur. Bata KL yako yepafiri parizvino!